1 Ahene 21:1-29
21 Na nsɛm yi akyi no, ná Yesreelni Nabot wɔ bobeturo bi a ɛbɛn Samaria hene Ahab ahemfie wɔ Yesreel.+ 2 Enti Ahab ka kyerɛɛ Nabot sɛ: “Fa wo bobeturo+ no ma me ɛ,+ na memfa nyɛ mfikyifuw,+ efisɛ ɛbɛn me fie; mɛma wo bobeturo a eye sen eyi de asi ananmu. Anaa wopɛ+ nso a, mɛma wo sika de atua ka.” 3 Nanso Nabot ka kyerɛɛ Ahab sɛ: “Ɛmpare me+ sɛ megyina Yehowa anim+ de m’agyanom agyapade ama wo.”+ 4 Ɛnna Ahab de awerɛhow baa ne fie mmɔbɔmmɔbɔ, asɛm a Yesreelni Nabot ka kyerɛɛ no sɛ: “Meremfa m’agyanom agyapade mma wo” no nti. Na ɔbɛdaa ne mpa so dan n’ani,+ na wannidi. 5 Ɛnna ne yere Yesebel+ baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ: “Dɛn nti na wo honhom abotow+ na wunnidi yi?” 6 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne yere sɛ: “Me ne Yesreelni Nabot kasae, na meka kyerɛɛ no sɛ, ‘Fa wo bobeturo no ma me, na memma wo sika mfa ntua ka. Anaa wopɛ nso a, ma memma wo bobeturo foforo nsi ananmu.’ Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Meremfa me bobeturo no mma wo.’”+ 7 Ɛnna ne yere Yesebel ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ wo na wudi Israel so hene?+ Sɔre didi na ma wo koma ani nnye. Me ara mede Yesreelni Nabot bobeturo no bɛma wo.”+ 8 Enti ɔkyerɛw krataa+ wɔ Ahab din mu de ɔhene nsɔano sɔɔ ano,+ na ɔde krataa no kɔmomaa kurom hɔ mpanyimfo+ ne mmapɔmma a wɔne Nabot te no. 9 Nsɛm a ɔkyerɛw wɔ krataa no mu ne sɛ:+ “Monka mma wonni mmuada, na momma Nabot ntena nnipa no ti. 10 Afei momma mmarima ahuhufo+ baanu+ ntena n’anim na wonni adanse ntia no+ sɛ, ‘Woadome Onyankopɔn ne ɔhene!’+ Afei momfa no mfi adi nkosiw no abo mma onwu.”+ 11 Enti ne kuromfo no, mpanyimfo ne mmapɔmma a wɔwɔ ne kurom hɔ no yɛɛ nea Yesebel de nkra brɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ no, wɔyɛe sɛnea wɔakyerɛw wɔ krataa a ɔde kɔmaa wɔn no mu pɛpɛɛpɛ.+ 12 Wɔkae ma wodii mmuada,+ na wɔmaa Nabot tenaa nnipa no anim. 13 Mmarima ahuhufo baanu bɛtenaa n’anim, na mmarima ahuhufo no dii adanse tiaa no, kyerɛ sɛ, wodii adanse tiaa Nabot wɔ nnipa no anim sɛ: “Nabot adome Onyankopɔn ne ɔhene!”+ Afei wɔde no fii adi kɔɔ kurotia, na wokosiw no abo ma owui.+ 14 Ɛnna wɔsoma kɔka kyerɛɛ Yesebel sɛ: “Wɔasiw Nabot abo ma wawu.”+ 15 Bere a Yesebel tee sɛ wɔasiw Nabot abo ma wawu no, ɛhɔ ara na Yesebel ka kyerɛɛ Ahab sɛ: “Sɔre kɔfa Yesreelni Nabot bobeturo+ a wamfa amma wo annye sika no, na Nabot nte nkwa mu bio, wawu.” 16 Bere a Ahab tee sɛ Nabot awu no, ntɛm ara na ɔsɔre kɔɔ Yesreelni Nabot bobeturo no mu sɛ ɔrekɔfa.+ 17 Na Yehowa asɛm+ baa Tisbini Elia+ nkyɛn sɛ: 18 “Sɔre kohyia Israel hene Ahab a ɔwɔ Samaria+ no. Ɔwɔ Nabot bobeturo no mu, wakɔ hɔ sɛ ɔrekɔfa. 19 Kɔka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Woakum+ obi asan afa n’ade?”’+ San ka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni, “Faako+ a akraman taforoo Nabot mogya no, ɛhɔ ara na akraman bɛtaforo wo nso wo mogya.”’”+ 20 Ɛnna Ahab ka kyerɛɛ Elia sɛ: “Ɔtamfo, woabehu me?”+ na ɔno nso kae sɛ: “Mabehu wo. ‘Esiane sɛ woatɔn wo ho sɛ wobɛyɛ Yehowa ani so bɔne+ nti, 21 hwɛ, mede mmusu reba wo so;+ mɛpra w’akyi nyinaa akɔ,+ na matwa Ahab fie barima+ biara akyene, Israel nipahunu a onni ɔboafo mpo. 22 Na mɛyɛ wo fie sɛ Nebat ba Yeroboam fie+ ne Ahiya ba Baasa fie,+ bɔne a woayɛ de ahyɛ me abufuw ne bɔne a woama Israel nso ayɛ nti.’+ 23 Na Yesebel nso, nea Yehowa aka wɔ ne ho ne sɛ, ‘Akraman na ebedi Yesebel nam wɔ Yesreel asase no so.+ 24 Ahab ho nipa biara a obewu wɔ kurow mu no, akraman na ebedi ne nam, na nea obewu wɔ wuram no, ewim nnomaa na ebedi ne nam.+ 25 Obiara biara nni hɔ a ɔyɛɛ n’ade sɛ Ahab+ a ɔtɔn ne ho sɛ ɔbɛyɛ Yehowa ani so bɔne, a ne yere Yesebel+ nso piapiaa+ no no. 26 Na ɔyɛɛ akyide a enye koraa kodii abosom fĩ akyi,+ sɛnea Amorifo a Yehowa pam wɔn fii Israelfo anim+ nyinaa yɛe no.’” 27 Bere a Ahab tee nsɛm yi no, ɛhɔ ara na osuan n’atade mu, na ɔde atweaatam kataa ne ho;+ odii mmuada na ɔdaa atweaatam mu na ɔnantew awerɛhow mu.+ 28 Ɛnna Yehowa asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ: 29 “Woahu sɛnea me nti Ahab abrɛ ne ho ase no?+ Esiane sɛ wabrɛ ne ho ase m’anim nti, meremfa mmusu no mma wɔ ne nna mu.+ Ne ba nna mu na mede mmusu no bɛba ne fie.”+